Ithegi: iiplagi zamagama | Martech Zone
Ithegi: iiplagi zamagama
NgoLwesibini, Januwari 26, 2021 NgoLwesithathu, Agasti 25, 2021 Douglas Karr
NgoMvulo, Novemba 9, 2020 NgoMvulo, Novemba 9, 2020 Douglas Karr
Ukuziphatha kokukhangela kubathengi kunye neshishini kuyaqhubeka nokutshintsha njengoko bezenzela ngokwabo kwaye befuna ulwazi abaludingayo ngaphandle kokunxibelelana nenkampani yakho. Ngelixa iirhafu, isonka, imixholo enxulumene noko, kunye noyilo zizinto ezibonakalayo zomsebenzisi ezinceda iindwendwe, ukukhangela indawo yangaphakathi kuhlala kungahoywa. Uphendlo lweSiza seWordPress Ngelixa iWindowsPress inento yokusebenza yangaphakathi ukusukela oko yaqalwa, ixhomekeke ikakhulu kubuchule bomhleli bokulungiselela izihloko, iindidi, iithegi kunye nomxholo. Oko kungazisa amava
Ukuba negalelo kwintshukumo yemithombo evulekileyo kunokuba yinto emangalisayo, kodwa kule veki ibingeloxesha lawo. Sibe negalelo kuluntu lweWordPress kwiminyaka elishumi ngoku. Sakhe iiplagi ezingenakubalwa. Abanye bathabathe umhlala-phantsi, kwaye abanye banombono omangalisayo. Umzekelo wethu Iplagi yeWijethi yeWidget, umzekelo, ikhutshelwe ngaphezulu kwamaxesha angama-120,000 kwaye iyasebenza kwiindawo ezingaphezu kwe-10,000 zeWordPress. Iplagi enye esityala kuyo amakhulu eeyure yiSetyuPress, i-imeyile